Diyo post :: प्रचण्डमाथि २६ बुँदे आरोप लगाउँदै लोकेन्द्र विष्टद्वारा पार्टी परित्याग, स्वतन्त्र भएको घोषणा ! प्रचण्डमाथि २६ बुँदे आरोप लगाउँदै लोकेन्द्र विष्टद्वारा पार्टी परित्याग, स्वतन्त्र भएको घोषणा ! - Diyo post
प्रचण्डमाथि २६ बुँदे आरोप लगाउँदै लोकेन्द्र विष्टद्वारा पार्टी परित्याग, स्वतन्त्र भएको घोषणा !
काठमाडौं । नेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेता लोकेन्द्र विष्टले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन् । दियोपोस्टसँग कुराकानी गर्ने क्रममा विष्टले आफू अब स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेका हुन् ।
उनले आफ्नो राजिनामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई बुझाइ सकेको समेत बताए । ‘कुनै ठोस जिम्मेवारी दिए फेरी माओवादीमा फर्कनु हुन्छ ? भनेर दियोपोस्टले सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘ म अब फर्कन्न । अब मेरो काम गर्ने पुग्यो । मैले अझै पाँच सात वर्ष गरिएला भन्ने सोचेको थिएँ । तर, यहाँ त्यस्ते भएन । मेरो मात्रै के कुरा धेरै साथीहरु त्यत्तिकै घाम तापेर बसेका छन् ।’
यसअघि विष्टले बुझाएको २१ बुँदे कार्यान्वयनमा कुनै तत्परता देखाएको, सिंगो संगठन सेटमा चलायमान गर्ने नभएर आफू र अंश मात्र रमाएको, बेला बखत समयसमयमा चित्त नबुझे निस्किएर गए हुन्छ भन्दै धम्क्याएको, पार्टी टुक्रा टुक्रा भएर जाँदा पनि आफू दोषी नहुनु तर अरुलाई मात्रै दोषी करार गरेको, पार्टीलाई संस्थागत र सामुहिक भन्दा पनि नितान्त व्यक्तिगत चिन्तन र सोँचमा चलाएको लगायत आरोप लगाएका छन् ।
विष्टको विस्तृत अन्तर्वार्ता दियोपोस्टमा प्रकाशित हुनेछ । प्रतिक्षा गर्नुहोस् ।
विष्टको अन्तर्वाता पढ्नुहोस
लोकेन्द्र विष्टको खुलासा: ‘प्रचण्ड निवासमा ‘रअ’ र सिआइएको मान्छे टुप्पी नाघेर प्रवेश गर्छन्’
यसरी हुन्छ मेडिकल शिक्षामा ‘दलाली’ : किस्ट मेडिकल कलेजमा पैसाको बार्गेनिङ (गोप्य भिडियो हेर्नुहोस्)
शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका हाड जोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द के.सी. १५ औँ पटक अनसनमा बसिरहेका छन् । यसपटक उनी मुलुककै दुर्गम ...
३३ किलो सुन प्रकरणः गोरेका भाई रमेश यूएईबाट पक्राउ
काठमाडौँ । ३३ किलो सुन प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मानिएका चुडामणी उप्रेती गोरेका भाई रमेश उप्रेती पक्राउ परेका छन । सुन ...
‘मून्द्रे’ कर्मचारीको ‘कर्तूत’ लुकाउन सुनापती गाउँपालिका अध्यक्षले निकाले यस्तो विज्ञप्ती !
दियोपोष्ट संवाददाता रामेछाप । सुनापति गाउँपालिकाभित्र कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको अनियमितताको ढाकछोप गर्न जनप्रतिनिधिहरु अघि सरेका छन् । गाउँपालिकाभित्र भएको विकास ...
होटल मजदुरको अधिकारमाथि ‘लात हान्दै’ नेताले गरे पैसा भागबण्डा गर्ने सम्झौता, अधिकार माग्न नपाइने !
काठमाडौं । होटल तथा क्यासिनोमा कार्यरत मजदुरहरुले आगामी दिनमा आफ्नो अधिकार माग गरेर आवाज समेत उठाउन नपाउने भएका छन् । ...
नवलपरासीमा सुनवलमा बस दुर्घटना, एकको मृत्यु २० घाईते !
काठमाडौँ । नवलपरासीको भूमहीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना भएको छ । नारायणघाटबाट नेपालगञ्ज हिडेको ना ६ ख ९४३८ नम्बरको बस अनियन्त्रित ...
अहिलेसम्म नेपालका २६ गैँडा उपहारस्वरुप विदेश पुगे, कुन देशलाई के दिईयो ?
रत्ननगर– नेपालले लिने मात्रै होइन दिन पनि जानेको छ भन्ने कुरा पटकपटक विभिन्न राष्ट्रलाई दिइएको दुर्लभ वन्यजन्तुको उपहारले प्रस्ट पार्छ ...
रातभरिको वर्षाले भक्तपुर डुवानमा: उद्धारकार्यमा नेपाली सेनाद्धारा डुङगा, क्रेन र हेलिकप्टरको प्रयोग !
काठमाडौँ । मंगलबार रातिको वर्षाले काठमाडौँ उपत्यकालाई अत्याधिक प्रभाव पारेको छ । उपत्यकाको भक्तपुर त डुवानमै परेको छ । भक्तपुरको ...
८८ प्रतिशत खानेपानीमा दिसा !
भक्तपुर - भक्तपुरवासीले प्रयोग गर्दै आएका ८८ प्रतिशत खानेपानीमा दिसामा पाइने कोलिफर्म पाइएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले बुधबार यहाँ ...